मनमोहन अधिकारीले थालनी गर्नुभयो, केपी ओलीले मुर्त रुप दिनुभयो - Janata Times
मनमोहन अधिकारीले थालनी गर्नुभयो, केपी ओलीले मुर्त रुप दिनुभयो
नेपाल-भारत १९५० को सन्धिमा सुधार
डा. भेषबहादुर थापा अर्थशास्त्री हुँदै कूटनीतिमा ख्याति कमाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नेपाली पक्षको संयोजक रहेर काम सम्पन्न गर्दै साझा प्रतिवेदन तयार गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका थापासँग ईपीजी, नेपाल-भारत सम्बन्ध, नेपालको पछिल्लो कूटनीतिकरराजनीतिक अवस्थालगायतबारे गरिएको कुराकानी :
पहिलो कुरा त नेपाल र भारत सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयको एउटा लिखित आधार तयार भएको छ । प्रतिवेदनलाई दुवै सरकारले बेवास्ता गरेर पछि हट्न सक्ने अवस्था अब छैन । सबभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहँदै आएको विषय हो, नेपाल–भारतको सम्बन्ध । सन् १९५० को सन्धि सुरुदेखि नै विवादित छ । कुनै न कुनै पक्षले अभिव्यक्ति दिएर सन्धि असमान भयो भन्दै आएका छन् ।
भारत स्वतन्त्र भएको केहीमै गरिएको त्यो सन्धिमा खारेज वा परिमार्जनका पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसैले हामीले निकै अध्ययन र मेहनत गरेर यसको साझा बाटो पहिचान गरेका छौं । हामी स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले निकै खुला भएर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । प्रतिवेदन हामी आठै जना भएर दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं । यो निकै छिटो हुन्छ । समय मिलाउँदै छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेर प्रतिवेदनबारे बाहिर बोल्छौं ।
साझा प्रतिवेदनका लागि भारतीय पक्ष एकाएक कसरी सहमत भयो रु पहिले त उनीहरू खासै सकारात्मक देखिएका थिएनन् नि ?
पटक-पटक कुरा उठेर पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विषय पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नै यहाँसम्म आइपुगेको भन्न मिल्छ ?
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली २ वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयले आकार लिएर हामीले काम थालेका हौं । नेपाल र भारतका दुवै पक्षसँग सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निकै लामो बहसपछि यो स्थितिमा हामी पुगेका हौं । पुराना तथ्य खोज्नेदेखि भएका सम्झौता केलाउने र कतिपय सम्झौताका जिउँदो साक्षीरअनुभवीसँग भेटेर छलफल गर्ने कामसमेत गर्यौं । यो प्रक्रिया नै यति लामो थियो कि उनीहरूले पनि कतिपय विषयमा सहकार्य गर्नैपर्ने थियो ।
भारतमा यो विषय मनमोहनसिंह प्रधानमन्त्री हुँदै महसुस गरिएको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहेन । राजनीतिक तहमै कतिपय विषय छलफलमा रहेकाले समयावधिदेखि कार्यादेश तोकेर काम अघि बढेको हो ।
यो साझा प्रतिवेदन बनेर हामी एक चरण माथि आइसकेका छौं । सरकारी संयन्त्रभन्दा छुट्टै संयन्त्र बनेर काम अघि बढ्यो र हामीले त्यो काम आफ्नो समयसीमामा अडिएर फत्ते गर्यौं । यो नेपाल एक्लै वा भारत एक्लैले होइन, दुवै पक्ष एक भएर गरेकाले परिवर्तित अवस्थामा समयसापेक्ष सम्बन्धसहितको सुझाव तयार भएको छ । सम्बन्धमा गुनासो २००७ सालदेखि हुँदै आएको भए पनि अग्रसर भएर काम अघि बढेको थिएन ।
आलटाल नहोस् भनेरै २ वर्षे कार्यादेश राखिएको हो । २ वर्षअघि यो विषय आरम्भ हुँदै त्यसका अन्य विषयलाई बलियो बनाउने काम भएको थियो ।
ईपीजी सरकारले बनाएको भन्ने हामीले भुल्न हुँदैन । यद्यपि, हामीले सबैसँग (हिमाल, पहाड र तराई) सबै पक्षको नेतृत्व र फिल्डमै उपस्थित भएर सरसल्लाह गरेका थियौं । आफ्नो अवधारणा उहाँहरूमाझ राखेका थियौं । सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकका विषयमा हामीले कुनै कमजोरी छाडेका छैनौं । यो ७० वर्षको अवधिमा सीमा, विमान अपहरण, अन्य मुलुकले नेपालबाट फाइदा उठाए भन्नेलगायत विषयमा भने हामीले त्यस्ता गतिविधिलाई ठाउँ नदिने भन्दै त्यसका लागि अन्य कुनै संयन्त्र बनाउने गरी सुझाएका छौं ।
विगतको विवाद र अस्वाभाविकताबाट यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने कसको के लाग्यो र रु तर कार्यान्वयनका लागि आधार तयार छ । आधारको खोजीमा हामी यहाँसम्म आएका छौं । विगतका गतिविधिबाट हामी धेरै टाढासम्म पुगेका छौं । सीमा, डुबान, जनसम्पर्क, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, रोटीबेटी सबै विषय सम्बोधन भएका छन् । नेपाल र भारतका सबै विषयमा सम्बोधन भएको छ । सन्धिले छोएको वा दुई देशको व्यवहारमा देखिएको संकेतमा नयाँ मोड दिने विषयमा सम्बोधन नभएको कुनै विषय नै छैन । प्रतिवेदनबाट सरकार पछि हट्न सक्ने स्थान नै छाडेका छैनौं । अब दुवै सरकारलाई यसले बाँधेको छ ।
अहिलेसम्म छिमेकीप्रति बढी ध्यान दिएका कारण अस्थिर वातावरणले हो । यहाँ कुनै पनि नीतिले निरन्तरता पाउन सकेन । अर्को पाटो भनेको नीति अपनाउँदाखेरि हुनुपर्ने सर्वसहमतिको प्रक्रिया संसद्ले अपनाउन सकेको छैन । छिमेकलाई प्रशय दिनुपर्छ । तर त्यसका आधारमा अन्यसँग सम्बन्धको धरातल तय गर्न हुँदैन । नेपालले जुन भूमिका बाङडुङ सम्मेलनपछि अँगालेको थियो, त्यो अहिले अलमलिएको छ ।
अस्थिरतताले निम्त्याएको विसंगतिमा निकै ध्यान जान आवश्यक छ । हामी आफंै परिमार्जन हुन आवश्यक छ । भारत, चीन वा अरूलाई दोष दिने होइन । हामीले के गरिरहेका छौं, त्यो स्मरण गर्न आवश्यक छ । अरूलाई हेर्ने कि आफूलाई राम्रो बनाउने, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
२००७ सालमा त्रिभुवनले भारतबाट प्रशासक मगाउनुपरेको थियो, पछि महेन्द्रले हटाए । त्यो भनेको समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने हो । आन्तरिक विषयलाई आफ्नो फाइदाका लागि बाह्यकरण गर्ने र बाह्यको उपस्थित भएपछि हस्तक्षेप भन्ने राम्रो होइन । पहिले कानुनको पालना हुन आवश्यक छ । राजनीति सङ्लिएमा त्यसले सुधारको बाटोमा लैजाला भन्ने आशा छ ।
मिलिभगतमा नियुक्ति भएर गएको अवस्था छ । कसरी राम्रो नतिजा दिन सक्छन् रु एउटा क्षेत्रको व्यक्तिलाई अर्कै क्षेत्रमा लगिन्छ अनि कसरी हुन्छ रु जुन क्षेत्रमा नियुक्त गर्ने हो, त्यो व्यक्ति त्यसमा दक्खल राख्ने हुनुपर्छ । दक्षता भनेको चतुर्याइँ मात्र होइन, प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कसरी व्यवहार गर्ने रु संवाद गर्ने रु प्रस्तुत कसरी हुने रु जस्ता विषय ध्यान दिन जरुरी छ । म नै आर्थिक क्षेत्रको मानिस कूटनीतिमा जाँदा धेरै ध्यान दिएको थिएँ ।
कतिपय मुलुकमा हामीले पठाउने राजदूत अकूटनीतिकभन्दा खेल्ने र खेलाउन सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ । एकेडेमी बनाउन छलफल गर्ने हुनुपर्छ । प्रक्रियाबाट ल्याएको नतिजा राम्रो छैन । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अब्बल बनाउने र कूटनीतिक एकेडेमी बनाएर त्यसमा प्रशिक्षण दिँदै विज्ञ तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । छरपस्ट जानकारीले अब्बल कूटनीतिज्ञ भइँदैन । यो अन्य मुलुकबाट सिक्नुपर्छ । राजदूतबाट नतिजा खोज्ने मात्र होइन, छनोट गर्दा नै ध्यान दिन आवश्यक छ । (कान्तिपुर दैनिक)
भूकम्पले भत्काएको कालिञ्चोक मन्दिर जाने पदमार्ग सेनाद्धारा पुनःनिर्माण
यस्तो बन्दै छ प्रदेशको पहिलो बजेट ?